Muri pano: musha / Technology News / famba / Ndeupi ruvara Samsung Galaxy Watch 4 yaunofanira kutenga?
Kwemwedzi mishoma inotevera, Samsung yave kuda kubata yakasarudzika monopoly pane Android smartwatch musika. Iyo Samsung Galaxy Tarisa 4 ndiyo wachi yekutanga kumhanyisa itsva Pfeka OS 3, uye nekudaro, ndiyo yekutanga Galaxy Watch ine mukana weGoogle masevhisi uye Android apps kuburikidza neGoogle Play. Izvi zvinosimudzira kusarudzwa kweapp uchiri kuchengeta Samsung dhizaini flair (inonzi One UI Watch) uye pakupedzisira zvipe Wear OS wachi yakasimba uye inotonhorera, kunyangwe pamaoko madiki. Ini pachangu ndanga ndakamirira makore kune wachi yakadai, uye zvino mubvunzo mumwe chete wasara: Ndeipi Galaxy Watch 4 ruvara rwandinotenga?
Iyi Watch 4 style inonyatsoenderana nePhantom Green Galaxy Z Fold 3, asi kunyangwe usiri kubata imwe yeiyo, mumvuri uyu unotaridzika zvakanaka uine akasiyana siyana silicone, simbi, uye tambo dzematehwe. Sanganisa nedehwe rebrown kune chitarisiko chechisikigo kana chero chero ruvara silicone bhendi kune yakawedzera kupenya mharidzo.
Kubva $ 280 kuSamsung
Rima uye kufunga
Galaxy Watch 4 44mm Nhema
Nepo iyo Phantom Green vhezheni yeGalaxy Watch 4 inoguma yaita kunge yakasviba muzviitiko zvakawanda, kune zvakare yakatwasuka, yakakosha dema kana usiri mune yevhu chitarisiko. Dema inobvumira wachi kuti itaridzike uye inzwe isina musono pakati pechidzitiro uye casing, uye nekuti dema rinoenda nezvose, unogona kushandisa chero bhendi kununga zvinhu kumusoro.
Galaxy Watch 4 44mm Sirivha
Kana mavara akasviba asiri ako, sirivheri ndiyo yega 44mm ruvara inogara padivi rakareruka rechiratidziro. Nekudaro, kusiyana neiyo 40mm vhezheni, iyi inouya nemwenje grey bhendi pane chena yakachena - machena machena mabhendi anongokumbira muchadenga kuti awane tsvina - uye goko resirivheri rinobvumira iyo dzvuku kutenderedza bhatani repamusoro pop zvishoma.
Galaxy Watch 4 40mm Pink Goridhe
Kana rose goridhe rinopenya nyika yako, iyi ndiyo Galaxy Watch 4 (40mm) ruvara rwekubata. Ndiyo chete isiri-monochromatic 40mm ruvara. Nehurombo, iyo inosanganisirwa bhendi ine blush-ruvara haisi kuzviita zvakanaka zvakawanda, asi iwe ungangotora tambo pack ine mamwe mavara, zvakadaro.
Kubva $ 250 kuSamsung
Blend in, mira kunze
Galaxy Watch 4 40mm Nhema
Kunaka kwechitema ndiko kuwanda kwayo. Iine matte nhema bhendi inosanganisirwa uye kupera kwebhurashi kwekasi yewachi, iyo Galaxy Watch 4 haizokwezve kutariswa, asi kana iwe uchinge wachinja bhendi iro neon tambo kana chena chaiyo, inonyatso buda pachena. Zvakafanana nemumiriri wepachivande, kunze kwekuti hazvizokwezva villains.
Galaxy Watch 4 40mm Sirivha
Kana goridhe uye rose goridhe zvisati zvambove jamu yako, asi iwe unoda chimwe chinhu chakajeka uye chinonakidza kupfuura chitema, pane nguva dzose sirivha yakanaka yekununura. Sezvo iyo Phantom Green inogumira kune 44mm Galaxy Watch 4, iyi ndiyo chaiyo yeWatch 4 ruvara yandiri kuzvitengera. Uye ndiri kutengera mabhandi emavara; zvakakomba, Samsung, chena ??
Galaxy Watch 4 Classic 42mm & 46mm Nhema
Ini handisi tsika yetekinoroji yemavara matema sezvo dema ndiko kusavapo kweruvara uye chero chigadzirwa chakambogadzirwa chinouya mairi. Nekudaro, pane chikonzero dema richiramba rakakurumbira: Inoenda nezvese, uye neyakaomeswa kutaridzika kwefuremu, inoburitsa hunyoro.
Kubva $ 350 kuSamsung
Kubva ku $ 330 kuAmazon
Iyo hombe yeSilver Galaxy Watch 4 Classic inoratidzira kupera kwebrashi kune yayo sirivheri ruvara iyo inoibatsira kupenya zviri pasi pemwenje pane kupenya sebhekoni. Iyo yakawedzera understated kutaridzika iyo inofanirwa mesh zvakanaka neakasiyana siyana mabhendi uye wadhiropu achiri akamira kunze kupfuura anofinha dema.
Kubva $ 380 kuSamsung
Uku hakusi kudzokorora, ndinopika! Kunyangwe Samsung ichingoidaidza kuti sirivheri pamasaizi ese eWatch 4 Classic, une inopenya asi yakawedzera scuff/smudge-prone sirivheri pane iyo 42mm modhi. Saka kana iwe ukada chitarisiko chisina tsvina pachinzvimbo cheiyo 46mm's brushed look, iyi ndiyo colorway yako. Asi zvakare, iwe unenge uchida snag isiri-chena bhendi.
Kana iwe uchinyatsoda yako Galaxy Watch 4 kuti ibude pachena, funga iyi yakakosha edition vhezheni kubva kune yakakurumbira Parisian fashoni uye mimhanzi brand Maison Kitsuné. Iyo inouya nemabhendi maviri akakosha, yakakosha-edition charger, uye zviso zvewachi zvinonakidza.
$ 400 paSamsung
Saka akawanda mimvuri yesirivha
Tarisa maratidziro emabhendi ewachi mune maviri esirivha casings kuti uwane manzwiro ekupedzisa kwakasiyana.
Kunyangwe zvisingashamise kuti iyo Galaxy Watch 4 Classic iri kungosvika mune sirivheri uye nhema, hazvisi nyore kudaro. Chekutanga, sirivha haisi sirivha chete kana zvasvika kune yeClassic: iyo 46mm Classic ine yakapfava yakafanana, yakapfava senge Galaxy Watch 4 sirivheri, asi iyo 42mm Classic ine kupenya kwakajeka, iyo icharatidza uye kupenya kupenya - zviri nani. kana kuipa. Chechipiri, ndinozvidza kana makambani achipa zvigadzirwa zvakasiyana zita rimwechete, kunyanya kambani yakaita seSamsung inongodaro vanoda kuwana grandiloquent pamwe chigadzirwa mavara.
Kune mavara chaiwo, iwe uchafanirwa kuenda neGirazi Watch 4, izvo zvakanaka nekuti iyo Watch 4 inonyanya kurongeka (uye inokwanisika). Ini ndaitarisira chaizvo kuti Phantom Green ichavepo kune ese masayizi, asi inongowanikwa kune yakakura 44mm modhi. Semunhu aive neGreen Galaxy Watch Active, ndaitarisira kuchengetedza streak iri mhenyu, asi 40mm ndiyo saizi iyo yakanyanya kugadzikana paruoko rwangu. Kuti izvozvo zviitike, zve 40mm mavara, Pink Goridhe yakanaka kana iwe watozembera kune iyo ruvara mumafoni ako - chero Lavendar kana Pink Samsung Galaxy S21 varidzi vanozove newachi inofananidza yavo kamera module zvakakwana. Zvakadaro, ndagara ndichisarudza sirivha pane goridhe, uye ndizvo zvandiri kufanorongera ini.
Kana iwe uri kutenga wachi yesirivha - mune chero saizi kana chimiro - ini ndinokurudzira kutora yekutsiva tambo kana tambo pack ine akawanda mavara. Zvichena uye zvichena zvichena zvinotaridzika zvakanaka pane zvigadzirwa, asi zvinokurumidza kuratidza kupfeka, dikita, uye grime. Ndine paki ine mavara gumi nemaviri, inondibvumira kufananidza wachi yangu newadhiropu yangu yemazuva ese kana mwaka: yepepuru yakatenderedza Halloween, yakatsvuka kutenderera Kisimusi, uye yebhuruu yakatenderedza Zuva reIndependence. Mabhendi ebato rechitatu anogona kunge asina kuvezwa achitenderedza mipendero yewachi semabhandi ekutanga, asi anouya mune mamwe akawanda akawanda.